Annaga - Hangzhou Heavye Technology saaraha & alaab-qeybiyaha
Awoodeena ku jirta R&D madax-banaan iyo kooxda injineernimada xikmad leh, ku faanta naqshadaynta ugu dabacsan iyo soo jeedinta wax soo saarka, iyo sidoo kale qalab horumarsan, maarayn tifaftiran, Heavye waxay ku guulaysataa aqoonsi iyo sumcad weyn macaamiisha dhinacyada miisaamidda adduunka oo dhan.
Had iyo jeer waxaan diirada saarnaa tayada, qiimaha iyo hal-abuurka. Farsamo yaqaan khibrad leh oo si fiican u tababaran, wax soo saar la isku halayn karo, farshaxannimo aad u horumarsan iyo maarayn caatada ah ayaa xaqiijin kara isku mid ahaanshaha badeecadeena, jaangooyooyinka iyo saxnaanta si qumman.
Waxaan u soo bandhignaa alaabo horumarsan oo heer sare ah, adeeg qalbi furan oo lagu qanco macaamiisha. Waxaan leenahay in ka badan 16 sano oo miisaamaysa khibrad-gacmo warshadeed iyo tignoolajiyada asaasiga ah. Falsafadayadu waa "inaynu daacad noqono, xoogga saarno, ku dadaalno oo aan diyaar u nahay inaan wadaagno". Waxaan u koraynaa si aan u noqono bixiye xalinta nidaamka isku dhafan ee miisaanka iyo xakamaynta.
Iyada oo la adeegsanayo CE, IP iyo oggolaanshaha kale, alaabadayadu si fiican ayaa loo qaabeeyey, shaqooyin badan leh, sax ah oo sarreeya oo la isku halayn karo ku dhawaad ​​codsi kasta iyo warshado miisaan leh.
Waxaan haynaa HF12 taxane ah tilmaame miisaan bandhig oo weyn, tilmaame HF22 ahama birta aan biyaha lahayn, Tusiyaha miisaanka guud ee HF105, HF132 taxane laba muuqaal ah xisaabinta qiimaha & tirinta tilmaamayaasha, HF310 taxanaha miisaanka tusiyaha leh daabacaadda gudaha, HF318 Taxanaha Qwerty Keypad Tilmaamaha miisaanka, HX1 taxane RF/Bluetooth gudbiyaha, HX2 taxane ah gudbiyaha wireless-ka aan biyuhu lahayn, taxane HF6, sanduuqyada taxanaha HJ, iwm